May 10, 2021 - ApannPyay Media
May 10, 2021 by ApannPyay Media
ကိုယ်စောင့်နတ်က တကယ်စောင့်ရှောက်ပါသလား လူတိုင်းသိထားသင့်သည် ့ကိုယ်စောင့်နတ် အကြောင်းနှင့် လူကို ကိုယ်စောင့်နတ် စောင့်ရှောက်ပုံအကြောင်း (မေး) ဦးဇင်းဘုရား ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာ တကယ်ရှိပါသလား ဘုရား? လူကို နတ်ကစောင့်တယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိပါသလား? တကယ်လို့ ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာရှိခဲ့ရင် ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ လူကို စောင့်ရှောက်ပေးပါသလဲ? သူဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နေတာပါလား ပြင်ပမှာ သီးခြားနေတာပါလားဆိုတာကို ဘုရားတပည့်တော်ကိုသနားစောင့်ရှောက် ချီးမြှောက်သောအားဖြင့်ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။ (ဖြေ) မေးခွန်းတွေက များလိုက်တာ။ ဦးဇင်း ခပ်တိုတိုနဲ့ လိုရင်းပဲ ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာ တကယ်ရှိပါတယ်။ “မကောင်းမှုပြုသော သူသည် သူမကောင်းမှုပြုတဲ့ အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင် ပဌမဦးစွာ သိ၏။ ထို့နောက် သူ၏ ကိုယ်စောင့်နတ်သိ၏။ ထို့နောက် သူတစ်ပါး၏ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်းပြီး သိနိုင်တဲ့ တန်ခိုးရှင်များသိကြ၏”လို့ ပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာ သုဒိန္ဒကဏ္ဍအဖွင့်မှာပါတဲ့ … Read more
အသက်ဘေးရန် အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေသော ဂါထာတော်
အသက်ဘေးရန် အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေသော ဂါထာတော် အသက်ဘေးရန် အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန် ရွတ်ဖတ်ပွားကာ အဆောင်အဖြစ် ရွတ်ပွားဆောင်ထား နိုင်ကြပါစေ။ ဘေးကင်းပါစေ ရန်ကင်းပါစေ ကပ်ရောဂါအန္တရာယ်မှန်သမျှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ အေးချမ်းသာယာ နိုင်ကြပါစေ။ အောင်မြင်ပါစေ ခရစ်ဒစ် အသက္ေဘးရန္ အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစေသာ ဂါထာေတာ္ အသက္ေဘးရန္ အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစရန္ ရြတ္ဖတ္ပြားကာ အေဆာင္အျဖစ္ ရြတ္ပြားေဆာင္ထား နိုင္ၾကပါေစ။ ေဘးကင္းပါေစ ရန္ကင္းပါေစ ကပ္ေရာဂါအႏၲရာယ္မွန္သမၽွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ေအးခ်မ္းသာယာ နိုင္ၾကပါေစ။ ေအာင္ျမင္ပါေစ ခရစ္ဒစ္
ချမ်းစိမ့်စိမ် ဖျားချင်သလိုလို ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကွမ်းရွက်၊ဂျင်းနဲ့ ထန်းလျှက်ကို သတိရပါ
ချမ်းစိမ့်စိမ် ဖျားချင်သလိုလို ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကွမ်းရွက်၊ဂျင်းနဲ့ ထန်းလျှက်ကို သတိရပါ ရာသီဥတု အကူးအပြောင်းမှာ ဖျားချင်သလိုလို ဖြစ်နေတာတွေ နဲ့ ချမ်းစိမ့်စိမ့် ရေချိုးဖို့ကြောက် ဟတ်ချိုးတွေကလည်း ခဏခဏ ကြုံလာပြီဆိုရင်တော့ ကွမ်းရွက်က ၂၀၀ ဖိုးဝယ် အရွက်လေး တွေချွေထား၊ ဂျင်းတက်အသေး တစ်တက် မထူမပါးလှီးထား၊ အညာထန်းလျှက်လေး နဲနဲရယ်ဆားနဲနဲထဲ့ပြီး ကြိုသောက်လိုက်တယ်။လည်ချောင်းထဲပူပြီး ရင်ထဲနွေးသွားတယ်။ ချွေးလေးစို့လာပြီး ရေချိုးချငိစိတ်ဖြစ်လာပေမဲ့ မနက်ဖြန်မှ ချိုးတော့မယ်။ အခိုးတွေပွင့်လာတော့ နေရတာပေါ့သွားတယ်။ ၃ ခွက်စာလောက်ပြုတ်လိုက်တာ ခုတစ်ခွက်သောက်ပြီး နောက်၂ နာရီလောက်နေ တစ်ခွက် ည အိပ်ခံနီး တစ်ခွက် ခပ်နွေးနွေးလေး သောက်မယ်။ အအေးမိသူတွေ ဖျားချင်သလိုလိုဖြစ်နေသူတွေ သောက်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ စေတနာမေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်ဝေမျှခခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆင့်ကမ်း ပြန်လည်ဝေမျှလို့လည်းရပါတယ်….။ Credit – … Read more
ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း လုံးဝမလုပ်သင့်ဘဲ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အချက်(၈)ချက်
ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း လုံးဝမလုပ်သင့်ဘဲ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အချက်(၈)ချက် ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း အသက်အန္တရာယ်ရှိပြီး လူအများလုပ်မိတတ်တဲ့ အမှား(၈)ချက် ဆိုတာ ဘာတွေလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အသက်သေစေနိုင်သည်အထိဖြစ်စေလို့ သတိထားပြီး ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်.။ (၁) ဆေးလိပ် မသောက်ပါနှင့်- ထမင်းစားပြီးနောက် စီးကရက် ၁-လိပ်သောက်ခြင်း သည် သာမန် အချိန် စီးကရက်၁၀-လိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ညီ မျှပြီး၊ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာပိုများကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာရှင် များက သတိပေးထား သည်။ (၂) သစ်သီးများ အလျင်စလို မစားပါနှင့် – ထမင်းစားပြီးနောက် အချိုပွဲ သစ်သီး စားခြင်းသည် မှားယွင်းသော အစဉ်အလာ တစ်ခုဖြစ်နေကြပါသည်။ အမှန် အားဖြင့် ထမင်းစား ပြီးပြီးချင်း သစ်သီးစားခြင်းက လေပွစေပြီး၊ အစာအိမ် ကို ဘေးဥပါသ်ဖြစ်စေ၏။ (ထို … Read more
ပါရာစီတမော သောက်တော့မယ့်ဆိုရင် သတိထားရှောင်ကျဉ်သင့်သည့်အရာများ
ပါရာစီတမော သောက်တော့မယ့်ဆိုရင် သတိထားရှောင်ကျဉ်သင့်သည့်အရာများ အခုပြောပြပေးမဲ့ အကြောင်းရာကတော့ ပါရာစီတမော “Paracetamol” အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ပါရာစီတမောကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှု မရှိပဲ အလွယ်တကူ ဝယ်သောက်နေသူများ များပြားလာပါပြီ ။ နေမကောင်းလို့ သောက်တယ် ၊ ခေါင်းမူးလို့ သောက်တယ် ၊ ညောင်းညာကိုက်ခဲလို့ သောက်တယ် ၊ ဗိုက်အောင့်လို သောက်ကြတယ် ။ အကြောင်း အမျိူးမျိူးနဲ့ သောက်သုံး နေတာကို တွေ့ရပါတယ် ။တကယ်တော့ ပါရာစီတမောဆိုတာ အဆိပ်တက်စေတဲ့ ဆေးဝါးပါ ။ နောက်ပြီးတော ကမ္ဘာကျော် အနာကျင် ပျောက်ဆေး တစ်မျိူးပါ ။ သူ့ကို သည်းခြေမှ အစာခြေ ရည်များက ဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့ အခါမှာ သေစေတဲ့ အဆိပ် အင်ဇိုင်းများကို ထွက်ပေါ် … Read more
ဆေးဖက်ဝင် ဍရင်ကောက်ပင် ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ
ဆေးဖက်ဝင် ဍရင်ကောက်ပင် ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ပုံမှာမြင်နေရတဲ့အပင်ကို ဍရင်ကောက်ပင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီး အခေါ်အဝေါ်များ အနည်းငယ်စီ ကွဲပြားကြပါတယ်။ ပူတာအို၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် စတဲ့ အေးတဲ့ဒေသနဲ့ တောတောင် ထူထပ်တဲ့ဒေသတို့မှာ ပေါက်ကြပါတယ်။ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနဲ့ တရုတ်တို့မှာလည်း ပေါက်ကြတယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးတို့မှာတော့ ကုန်စိမ်းစျေးတို့မှာ တစ်ခါတရံ ရနိုင်ပါတယ်။ အရိုင်းပင်နဲ့ အယဉ်ပင် နှစ်မျိုးရှိပြီး အခုပုံမှာ မြင်နေရတာကတော့ စားရတဲ့ အယဉ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဍရင်ကောက်ပင်မှာ Antioxidant ဓါတ်၊ ဗီတာမင် A ဓါတ်နဲ့ Carotene ဓါတ်တို့ ပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကူ ပေးနိုင်ပါတယ်။ (၁) ဍရင်ကောက်ပင်ကို ကြော်စားခြင်း၊ … Read more
အသည်း၊ ကျောက်ကပ် အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် သင်္ဘောစေ့ စားပေးခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
အသည်း၊ ကျောက်ကပ် အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် သင်္ဘောစေ့ စားပေးခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ သဘောင်္သီးကို စားတဲ့အခါမှာ အစေ့ကိုအမြဲတမ်း လွှင့်ပစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်္ဘောစေ့ရဲ့ အကျိုး ကျေးဇူးတွေကို သိပြီးရင်တော့ လွှင့်ပစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်္ဘောစေ့မှာ ရောဂါပေါင်းများစွာကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေပါဝင်နေလို့ပါပဲ။သင်္ဘောစေ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး – ၁။ ကင်ဆာ – သင်္ဘောစေ့ဟာ ကင်ဆာ တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် အထူးကောင်မွန်တဲ့ ဆေးတစ်လက်ပါပဲ။ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ကြီးထွားမှုကို တားဆီးပေးနိုင်ပြီး ရင်သားကင်ဆာ ၊ အူမကြီးကင်ဆာ ၊ သွေးကင်ဆာ ၊ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာနဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ အသည်းကျန်းမာရေး – သစ်သီးဖျော်ရည် (သို့) အစားအစာတွေထဲမှာ သင်္ဘောစေ့ ၅ စေ့ … Read more
သင်၏မျက်လုံးအားပြန်ကောင်းပြီး မျက်မှန်လွတ်တဲ့နည်း ပထမဦးဆုံး အိပ်ရာကနိုးပြီးပြီးချင်း ၊ မျက်နှာကိုအရင်မသစ်ရဘူး ၊ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံး ဒူးအထက်ကနေပြီး ရေသုံးခွက်စီလောက်လောင်းပေးရမယ် ။ ဒါက တစ်ကိုယ်လုံးမှာပြန့်နှံနေတဲ့ အပူခိုးတွေကိုခြေထောက်ရောက်သွားအောင် ဆွဲချလိုက်တာပါ ။အိပ်ရာကထလာတာနဲ့အပူတွေကတစ်ကိုယ်လုံးမှာပြန့်နှံ့နေတာပါ ၊ ဒီအချိန်မှာ အရင်ကထုံးစံအတိုင်း မျက်နှာကိုအရင်သစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေနဲ့ထိပြီးအေးသွားတဲ့ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကို တစ်ကိုယ်လုံးက အပူတွေ အကုန်ပြေးလာကြပါတယ် ၊ ဒါကြောင့်မျက်စိကိုတစ်ကိုယ်လုံးက အပူခိုး ၊အပူငွေ့တွေလာရိုက်တော့တာပေါ့ ။ သေချာသိချင်ရင် မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်ပါ ၊ မျက်လုံးနှစ်လုံးစလုံး ” ရဲ ” နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ အဲ့ဒီလိုအပူခိုးတွေ ရိုက်ပါများလာတဲ့အခါ ” ဒီမျက်စိကမှုန်ပြီး အားနည်းသွားတာပေါ့ ” ။ဒါကြောင့်အပူခိုးတွေ မျက်စိဆီကိုမသွားဘဲ အောက်ရောက်သွားအောင်ခြေထောက်ကိုအရင်ရေလောင်းရတာပေါ့ ၊ ဒူးကနေရေလောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ချက်ချင်းမျက်နှာမသစ်ရသေးဘူး ။ ချိုင်းကြားနှစ်ဖက်မှာ ကပ်ကျန်နေတဲ့ အပူခိုးတွေ ထွက်သွားအောင် မတ်တတ်ရပ်ပြီး … Read more
ဆံပင်ဖြူခြင်းအတွက် အလွယ်ကူ ဆုံးကုသနည်း
ဆံပင်ဖြူခြင်းအတွက် အလွယ်ကူ ဆုံးကုသနည်း အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူခြင်းဟာ လူငယ်တော်တော်များများမှာ တွေ့လာရတယ်။ ပုံမှန်အား ဖြင့် အသက်(၄၀)ကျော်မှသာ ဆံပင်ဖြူကြပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ အသက်(၂၀)ကျော်နဲ့ ဆံပင်ဖြူလာသူတွေ တွေ့လာရပြီ။ အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူတာကို premature grey hair လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဆံပင်အရောင်ကိုဖြစ်စေတဲ့ ရောင်ခြယ်ဆဲလ် melanin ထုတ် လုပ် မှုနည်းလာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မျိုးရိုး၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုတွေက ဆံပင်အရောင်ကို ဖြူလာစေတယ်။ အသက်အရွယ်အရ ဆံပင်ဖြူသူတွေအတွက် သိပ်ကိစ္စမ ရှိပေမယ့် လူငယ်တွေအတွက်တော့ အိပ်မက်ဆိုးတွေသာ ဖြစ်တယ်။ အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင် ဖြူလာတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ မျိုးရိုးတခုတည်းတင်မဟုတ်ဘဲ အင်တီ အောက် စီးဒင့်တမျိုးဖြစ်တဲ့ catalase ဓာတ် ချို့တဲ့ခြင်းနဲ့ … Read more